Fomba ahazoana mpankafy mamorona sy mizara atiny ho anao | Martech Zone
Nozarainay fotsiny ny fomba LinkedIn dia nampiasa fitantarana tantara ary ny tantaran'ny mpampiasa mba hampitomboana ny ezaka amin'ny varotra marika ary hampiakatra ity sary avy any Neil Patel ity - Fomba ahazoana mpankafy mamorona sy mizara atiny ho anao. Ny infographic dia mamakivaky ny tombony sy ny porofon'ny paikadin'ny atiny ateraky ny mpampiasa (UGC).
Tsy vitan'ny hoe mamonjy vola fotsiny ny atiny novokarin'ny mpampiasa, fa hamokatra koa ho anao. Arakaraka ny ampifandraisanao amin'ireo mpankafy anao amin'ny orinasanao no hampitomboanao ny fitokisanao, ary arakaraka ny hahabe ny tanjonao. Hahita tombony SEO ihany koa ianao. Mba hampisehoana aminao ny fomba ahafahanao mampifandray ireo mpitsidika anao ka manomboka mamorona sy mizara atiny ho anao izy ireo, Quicksprout dia nanangona infographic izay manazava ny fizotrany.
Omeo fitaovana ary ampianaro ny mpankafy anao amin'ny fomba fanoratana, fizarana sary sy horonan-tsary aminao ary avy eo ny mpiasao dia afaka mifantoka amin'ny famolavolana, fandefasana tsara ny tantara ary famokarana ny atiny izay mampiroborobo ny marikao! Na dia mila fanavaozana ny fizotry ny varotra atiny aza ianao, dia misy tahiry (sy tsy ampoizina maro) amin'ny fampiasana ny atin'ny mpampiasa anao hampielezana ny teny!
Tags: ugcatiny novokarin'ny mpampiasasary novokarin'ny mpampiasampampiasa-niterakahoronantsary novokarin'ny mpampiasa